Maka: layisha iifayile ezintsha
Ukuqala kwam ukuqala kwenkqubo malunga namashumi amabini eminyaka eyadlulayo, bendinogxa wam owayengumyili oyili kunye nonjiniyela wobungqondi. Ngalo lonke ixesha ndolula isandla sam sasekunene, wayedla ngokudumzela malunga nokuba nempuku. Inguqulelo yakhe yayingachanekanga kwezopolitiko kwaye yayihlala isongelwe ngamagama angamanyala angakhuselekanga emsebenzini… kodwa ndiyajika. Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, ndisaxhomekeke kwimouse yam. Oko kwathiwa, ndinayo